Autogyro ~ Journey-Assist - sidina amin'ny gyrocopter, gyroplane
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Sidina Mifohaza » autogyro
Autogyro. Gyroplane, gyrocopter, rotaplan, gyroplane
Autogyro (autogyro), aka Gyroplane, Gyrocopter, Rotaplan ary Giroplane. Rotorcraft mampiasa fifamoivoizana hamorona ny Fanodina, izay mihodina malalaka amin'ny fomba autorotation.
Raha tsotra kokoa izany, ny Gyroplane dia zavatra mitovy amin'ny helikoptera mini miaraka amin'ny hôpitaly misokatra (ho an'ny sidina amin'ny toetr'andro mangatsiaka, misy gyroplanes miaraka amina patilasy mihidy mihidy). Ny lalantsara gyroplane dia fampiasa amin'ny kalesin'ny môtô. Nifarana teo ambony lohalika ny lafiny. Hadalana mangarahara eo anoloana (toy ny moto).
Ny fitsipiky ny gyro
Ny fitsipika fototra izay manome ny gyro dia atsangana windmilling. Amin'ity fomba ity, ny skoty dia tsy mandeha amin'ny masinina, fa mihodina tsy miankina amin'ny fikorianan'ny rivotra miditra. Raha atao teny hafa, ny angovo ateraky ny rivotra dia manodinkodina ny kiriritra (ny milina fitotoana dia mety ho ohatra tsara amin'ny ataon-dokotera, tsara, na tadidio, tamin'ny mbola kely, dia nihazakazaka nanodidina ny tokotany izy ireo, ary noporofoina avy tamin'ny taratasy ny volon-doha).
Toy ny fitsipika, gyroplane-misy ao anatiny, misy koa ny motera misy ny fanosehana (eo am-baravarana) na ny kitapom-batana (eo alohany). Ity kodiarana ity no miteraka ny hery ho an'ny gyroplane handroso, ary ity hetsika ity, dia ahafahan'ny aotraotation miasa. Mihodina ny kodiarana lehibe, izay mamorona hery iray (ao amin'ny tarehimarika - R). izany hoe Ny gyroplane dia tsy mahavita manala, toy ny helikoptera (afa-tsy amin'ny tranga manana loha lohany (8+ m / s). Ny toetra mampiavaka ny gyroplane dia ny fisian'ilay fiaramanidina lehibe indrindra kely kely miverina aoriana (ny helikoptera mandroso). Ilaina izany, ka azo atao tsara rehefa mandroso ny gyroplane (na amin'ny loha-lohany) fa misy ny fantsom-pifandraisana iray izay mamolavola ny mpizara.
Ny mampiavaka ny gyro
Ny fikarakarana giroplany indroa indrindra. Saingy misy iray, telo, efatra manandoka.
Amin ny lafiny fampiasana rafitra fisondrotana visy (mekanika na hidraulika, na manual aza) dia ampy 10-30 metatra ny gyroplane.
Ny sidina Autogyro dia mirefy 180km / h (firaketana 207,7km / ora)
Fividianana solika amin'ny hafainganam-pandehan'ny lalana 120km / h, dia 7 ka hatramin'ny 15l isaky ny 100km.
Ny fahatrarana milina solika hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 100l. (Nampiasa lasantsy a-95)
Ny lanjan'ny gyroplane avo roa dia manomboka amin'ny 250kg. Ny fahaiza-manafoanana dia manomboka amin'ny 200kg.
Ny vidin'ny gyroplane kalitao tsara dia manomboka amin'ny 60t. Euro.
Ny vidin'ny sidina fahafinaretana dia eo amin'ny $ 100 isaky 20 minitra.
Gyroplane dia heverina ho fiaramanidina azo antoka indrindra.
Na dia tsy mahomby ilay motera nanosika ny gyrocopter dia tsy ho lavo io ary hanomboka hianjera amin'ny hafainganam-pandeha ary, vokatr'izany, hanomboka mihena tsikelikely ilay fitaovana.
Androany dia afaka manidina amin'ny gyroplane iray raha tsy mividy azy. Efa misy antonona ny orinasam-pifandraisana manome asa fanompoana toa izany. Fotoana natolotry ny sidina iray toy ny antsasak'adiny.
Inona ny atao hoe gyroplane
Gyroplane manjelanjatra maivana
Manintona amin'ny famotorana
Ireo fikambanan'ny mpikarakara manome fahafahana hanidina amin'ny gyroplane
Fanomezana ny lanitra
Ivontoerana fanofanana TsSP